Culimo xagjira iyo kuwo kale oo kufri ku tilmaamey hadal uu jeediyay siyaasi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Culimo xagjira iyo kuwo kale oo kufri ku tilmaamey hadal uu jeediyay siyaasi
Sheekh Soomow oo aad uga gilgishey wadaadka Maxamed Umal oo caayay rasuulkeena SCW ayaa ka hadley hadal ka soo yeeray siyaasiga hore u gatey badda hadana raba in la soo doorto ee C/raxmaan C/shakuur oo beeniyay xadiis saxiixa oo ku wajahan haweenka.
Xadiiska ayaa sheegaya in haweenka naaqus yihiin halka C/raxmaan C/shakuur Ku sheegay mid aan waxba Ka jirin oo wadaadadu jeebka Kala soo baxeen, inkastoo uu sheegay inuunasi toosa u avaarin xadiis gooniya.
Haddaba wadaadka xagjirka ah ee ku jira xabsiga furan ee Dawladda ee Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay in hadalka C/raxmaan C/shakuur yahay mid kufrinimo ah.
“Wuxuu raaligelinayaa gaalada wuxuuna beeninayaa xadiis saxiixa oo uu rasuulku CSW sheegay oo oo saxiixa ayuu yiri Xasan Daahir in dhowba fariimo Ka soo dira xabsiga ilaa xilligii Xasan Sheekh. Waan aqaanaa anigu C/raxmaan wuuna yaqaanaa xadiiska ayuu raaciyay.
Jawaabta C/raxmaan C/shakuur
Waraaq uu saxiixan yahay xisbigiisa Wadajir ayuu Ku cambaareeyay hadalkaaga kina tilmaamey mid ay dawladu ka dambeyso oo argagixisada fursad lagu siinayo. Haddii wax la ii gaystana ay iyadu ka masuul tahay ayuu Ku soo xirey.